Mpanakanto nomerika mampiseho ny fiainan’ireo Thailandey sy tolona ho amin’ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Noantsafain'ny Global Voices momba ny zavakanto hetsi-panoherana ny artista Pssyppl
Voadika ny 17 Febroary 2021 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Português, Ελληνικά, 繁體中文, Deutsch, English
‘Fiainana maha-Bangkokian 01’. Hosodoko nomerika nataon'ny pssyppl, nahazoana alalana. Mampiseho tanora manasongadina ny fiarahabana amin'ny ‘Lalaon'ny Hanoanana’ (Hunger Games) izay ampiasain'ireo tanora mpanao fihetsiketsehana ao Thailandy amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo momba ny fanavaozana demaokratika.
Mpanakanto marobe no nanohana ny hetsi-panoherana notarihin'ny tanora izay nitaky fanavaozana demaokratika tany Thailandy tamin'ny taona 2020. Iray amin'ireo mpanakanto ireo i Pssyppl, nofaritan'ny BK Magazine ho toy ny “mpanakanto sy mpamorona mivoatra vetivety, izay mamokatra sary hosodoko nomerika maizina sy manesoeso be izay maneho ny olana mandoro amin'ny androntsika. ”
Tao amin'ny lahatsoratra milaza momba azy sy ireo mpanakanto hafa ao amin'ny BK Magazine, nizara ity filazalazany momba ny fahitany ny zavakanto ity i Pssyppl:
Miompana amin'ireo hetsika mitranga manodidina ahy — hetsika izay mamela ahy hanana fahatsapana ao anatin'ny lohako ny sangan'asako nomerika, ary avy eo noforonina sy naseho tamin'ny fomba manesoeso amin'ny alàlan'ny sary hosodoko nomerika izany fahatsapana izany. Ny antony nanaovako ireo sombin-javatra ireo dia noho ny hatezerana — hatezerana izay tsy afaka hiteny na inona na inona na hanao zavatra hanoherana ity rafitra voakolikoly ity [izay mitondra an'i Thailandy]. Ny kanto no mba hany fomba hanehoako izany fihetseham-po mirehitra ato an-tsaiko izany.
Toa hery mitarika iray ao ambadiky ny sanganasa an-tsivalo tokoa ny hatezerana hoy i Pssyppl namoaka tao amin'ny Instagram. Maneho ny fanoheran'ny Thailandey ny governemanta mampiasa ny lalàna famoretana Fizarana 112 hisamborana ireo izay mitsikera ny fitondram-panjaka tokana ny iray amin'izy ireo.
Nasongadin'ny tranokalam-baovao New Naratif ity sangan'asa ity ary ahitana ny famariparitana avy amin'ilay mpanakanto:
Nampahoriana isika vahoaka, nahodikodina ary nofehezin'ireo fahefana ambony indrindra nandritra ny ela be araka ny fitadidiako azy. Satria nanomboka nihozongozona ny tilikambo fotsy (vangin'elefanta) -ndry zareo, fotoana izao ijoroantsika hijoroan'ny hoavy tsaratsara kokoa tsy ho antsika ihany fa ho an'ny taranaka manaraka ihany koa.
Sangan'asa iray hafa mitsikera ny miaramila, izay nanao fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 ary mbola maifehy hatrany ao amin'ny governemanta sivily na dia teo aza ny fifidianana natao tamin'ny taona 2019.*
Nataoko ho amina bikan'olona jeneraly iray ity rafitra maimbo an'i Thailandy ity. Ilay rafitra mivovò baiko aminao ka ho arahanao. Ilay rafitra miteny ao ambadiky ny afisy fa efa miaina tsara ianao, aza manontany, azy mitady hanova ny zavatra. Ilay rafitra manafina ny vatan'ireo olona miezaka ny hiady ho amin'ny fiainany, manolana ny tantara ary mampiady olona. Any amin'ny farany, afisy ihany izany. Na misafidy hino izany ‘rafitra’ miezaka ny hifehy anao amin'ny alalan'ny zavakanto, na miaraka isika ho afa-miady amin'ny rafitra ka manjera izany ho amin'ny tany.
Noantsafaiko i Pssyppl tamin'ny alalan'ny Twitter ny amin'ny maha-zavadehibe ny zavakanto amin'ny fizakàna fanohanana ny hetsika prô-demaokrasia eto Thailandy:
Araka ny hevitro, ao amin'ny firenena tsy ahafahan'ny vahoaka miteny ny zavamisy ny mampiely ny marina, dia zava-dehibe ihany ny zavakanto, ny mozika, ny fanatontosana fampisehoana ary ireo endrika fanehoana hevitra hafa ankoatra ny teny. Misy ny lalana hafa ho an'ny olona hanehoany ny fahatsapany, mba hahatonga ny olona hihaino.
Nanontany azy ihany koa momba ny fitrandrahana mialoha ny fanentanana ho amin'ny demaokrasia anatin'ny taona 2021 izy io:
Nandeha lalan-davitra isika hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana fito taona lasa izay. Ho lava ny ady ary mety mbola ho lavitra noho ny taona 2021 raha ny hevitro. Tsy ho afaka tena miteny izay ho avoakan'ny ampitso aho, saingy hisy ny fiovana ary manomboka mipongatra ny tsipalotry ny fanantenana. Ankehitriny moa mihaodihaody ny covid-19, mbola betsaka noho ny teo aloha ny andraikitsika. Hiadana dia hiadana ny fizotrany saingy mino aho fa miroso tokoa isika.
Ity ny hafatra nataony ho an'ireo artista namana:
Ho ahy, zava-dehibe ambony indrindra ny tsy hisalasalanao momba anao. Hisy ny asa ho halanao, hahatsiaro ho tofoka ianao sy hisaritaka na dia nisafidy ny anjara tsara aza. Saingy io no tianao, aza mitsahatra manao zavakanto. Raha tsy mahomby ianao, manandrana fa mbola tsy mahomby ihany mandra-pitiavanao ny tsy-fahombiazanao.